प्रदेश १ सरकारतर्फ सबैको ध्यान, अब के होला ? | Prabhavkari News
प्रदेश १ सरकारतर्फ सबैको ध्यान, अब के होला ?
प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता १ हप्ता अगाडि
दमक/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेसंगै सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवाद बढ्दै जाँदा अनौपचारिक फुटसम्म पार्टी आएको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई समेत प्रभाव परेको छ । प्रदेश सभा पनि भङ्ग हुने अड्कल बाजि भएपनि अहिलेसम्म त्यो भएको छैन ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । सरकारले यो रोक्न खोजेता पनि सभामुखले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएसंगै यहाँ नयाँ राजनीतिक तंरग पैदा भएको छ । सरकार तथा सरकार पक्षिय प्रदेश सभा सदस्यहरु सहभागि नभएको प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल भएको हो ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थापित संसदीय अभ्याश र प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबिरुद्ध आइतबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भन्दै सत्तारुढ प्रदेश सभा सदस्यहरु सहभागि नभएको बताईएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईबिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेकाहुन् । यो प्रस्ताव पेश भएसंगै फागुन २० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
यसले अब प्रदेश १ को राजनीतिक समिकरण र सरकारको भूमिका के होला ? भन्ने चासो बढेको छ । मुख्यमन्त्री राईबिरुद्ध गत पुस १२ गते प्रदेशसभामा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जसमध्ये पाँच जनाले प्रस्ताव फिर्ता लिएकाछन् ।